Ngwakọta Mmekọahụ nke Mmekọahụ - Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Ngwá Ọrụ Mmekọahụ nke Mmekọahụ
"Ndị isi azụmahịa ga-egosipụtakwa na ha na-eme ihe n'ịkwụsị iyi egwu mmekọahụ" kwupụtara Equality and Human Rights Commission.
... na ị na-ekiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ịntanetị mgbe nile na-enwe njikọ chiri anya na omume mmekọahụ na omume misogynist? Pasent iri nke ndị okenye nọ na UK na-ekweta na ha na-eji ike ịntanetị na-arụ ọrụ. N'adịghị ka mmanya na-aba n'anya ma ọ bụ ọgwụ ọjọọ, omume mmekọahụ ike na-esiri ike ịhụ ma mmetụta ya adịghị njọ. Ndị na-eto eto na-esikarị ike ịmalite iji ike eme ihe na, na-arịwanye elu, ụmụ agbọghọ.
Na December 2017, Equality and Human Rights Commission (EHRC) degaara oche oche nke FTSE 100 na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ekwu na ọ ga-eme ihe iwu kwadoro ebe e nwere ihe na-egosi na enweghị ike igbochi, ma ọ bụ na-emeso, iyi egwu mmekọahụ *. Nke a mere na mmeghachi omume nke egwu egwu Hollywood na Westminster, na mgbasa ozi #MeToo. Ọ rịọrọ ka ha nye ihe àmà nke:
ihe nchebe ha nwere ebe iji gbochie iyi egwu mmekọahụ
kedu ihe ha mere iji hụ na ndị ọrụ niile nwere ike ịkọ akụkọ ihe egwu na-enweghị atụ egwu
otú ha si eme atụmatụ igbochi iyi egwu na ọdịnihu
Kpọọ ka emee ihe
Nzukọ ọ bụla adịghị mfe n'ihe ize ndụ nke esemokwu mmekọahụ. Ka anyị nyere gị aka imeghachi omume n'ụzọ dị irè site na ịmepụta otu ndị ọkachamara na-arụ ọrụ iji mebie ihe ize ndụ a. Anyị na-adanye ọrụ iji chebe ihu ọha nke ụlọ ọrụ gị na ndị ọrụ gọọmenti na-enwe mmekọahụ.
Ihe omumu ihe omumu zuru oke maka ndi oru ugbo di iche iche na umuaka ndi mmadu no na ihe omimi nke ikiri ihe ndi ozo n'uwa na ahuike. Ụlọ akwụkwọ Royal nke GP kwadoro ya.
Ọkara ụbọchị maka ndị ọkachamara na-ahụ maka ihe ndị na-ahụ maka ịntanetị na mmetụta nke ịntanetị na ahụ ike na ahụike, iyi egwu mmekọahụ, mmebi iwu na mmebi akụkọ. Ndị na-eso ha ga-amụta site na ọmụmụ ihe na nyocha banyere ihe ọzụzụ a ga-etinye iji mee ka ọrụ ụlọ ọrụ kwado igbochi iyi egwu mmekọahụ n'ọdịnihu
Ọkara nke ụbọchị ma ọ bụ ụbọchị nchịkọta zuru ezu maka ìgwè nke ndị na-elekọta 30-40 na mmetụta nke ịntanetị na-ahụ maka ahụike, omume na-arụ ọrụ, na mmejọ onye omekome na otu esi arụ ụlọ ọrụ dịka ihe mgbochi megide nsogbu nsogbu mmekọahụ.
Nkọwa mmalite nke 1 maka ụdị ọ bụla nke otu na-akọwa mmetụta nke ịntanetị na-akpali agụụ mmekọahụ na ahụike, omume na-arụ ọrụ, ihe gbasara onye omekome onwe ya na otu esi arụ ụlọ ọrụ dịka ihe ngbochi.
Onyinye Ụgwọ Ụgwọ - Ịhụnanya, Mmekọahụ na Intanet, bụ ọrụ ebere mmụta mba nile nke na-eziga okwu na ulo nyocha banyere mmetụta nke ịntanetị na-ahụ maka ahụike, inweta, mmekọrịta na omempụ. Ụlọ ọrụ Royal nke General Practitioners kwadoro anyị ka anyị nye ndị ọkachamara ahụike na ndị ọzọ ọrụ maka ahụ ike ọrụ.
Onye isi anyị, Mary Sharpe, Onye Nkwado, na-arụ ọrụ na iwu ndị omempụ ma nwee ahụmahụ dị ukwuu na ndị ọrụ ọzụzụ na mba na mba. Maka afọ 9, ọ na-azụ ndị ọrụ na ụmụ akwụkwọ na Mahadum Cambridge na-enwe ọganihu onwe onye. Anyị na-arụkọ ọrụ na ọtụtụ ndị enyi gụnyere ọkachamara na ndị ọkà mmụta sayensị.
Mgbe ndị mmadụ matara na enwere nsogbu ndị na-akpata ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-eji ha eme ihe, ha dị njikere ịnwe ibu ọrụ maka mgbanwe. Ilekwasị anya na ọzụzụ na ihe kpatara ya bụ ụzọ dị irè iji gbochie ma ọ bụ belata iyi egwu mmekọahụ n'ọdịnihu.
Maka ozi ndị ọzọ biko kpọtụrụ mary@rewardfoundation.org Mobile: + 44 (0) 7717 437 727
* Egwu mmekorita na-eme mgbe mmadụ na-eme omume na-achọghị nke bụ mmekọahụ na nke nwere nzube ma ọ bụ mmebi nke imebi ùgwù mmadụ ma ọ bụ ime ka ha nwee egwu, iwe, na-eweda ala ma ọ bụ na-eweda ha ala.
'Okpukpe' nwere ike ikpuchi okwu, okwu ma ọ bụ n'omume, gụnyere inwe mmekọahụ na-adịghị mma, mkparị na-ekwesịghị ekwesị, ụdị mmejọ mmekọahụ, ịkwa iko, igosi foto foto ma ọ bụ eserese, ma ọ bụ izipu ozi ịntanetị site n'ihe gbasara mmekọahụ.